Maninona izahay no nanitsy sy nanova ny fonenantsika ho Martech.zone | Martech Zone
Maninona izahay no nanitsy sy nanova ny sehatra ho lasa faritra Martech.zone
Alahady 29 Janoary 2017 Alakamisy, May 7, 2020 Douglas Karr
Mahaliana ilay teny hoe bilaogy. Taona maro lasa izay, rehefa nanoratra aho Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies, Tiako ilay teny bilaogy satria nanondro fahatsapana ny maha-izy azy sy ny mangarahara. Tsy voatery niankina tanteraka tamin'ny fametrahana ny vaovao intsony ny orinasa hanambarana ny kolontsainy, ny vaovao na ny fivoarany. Azon'izy ireo nalefa tamin'ny alàlan'ny bilaogin'izy ireo ary nanangana vondrom-piarahamonina iray tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy nanako ny marik'izy ireo. Rehefa mandeha ny fotoana dia afaka manangana mpihaino, fiaraha-monina ary mpisolovava izy ireo.
Ireo orinasa dia afaka nizara ity fampahalalana ity mihoatra ny fananany (haino aman-jery tompony), na izany aza. Manana fotoana tsy mampino ihany koa izy ireo handrenesana ny feony amin'ny zavatra vita an-tsoratra hafa (haino aman-jery nahazo). Samy, mazava ho azy, samy manana ny azo zaraina (haino aman-jery sosialy) na mandoa vola ary manandratra (haino aman-jery karama). Ny fepetra Blaogin'ny orinasa dia nametra, ary ny teny Content Marketing no nitarika nandritra ny dimy taona farany tamin'ny fandrakofana ireo paikady naparitaky ny orinasa tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery tompony, ny media, ny media sosialy, ary ny loharanom-baovao voaloa. Mahavariana fa nanana boky iray tena izy nefa nanoratra azy io ho Marketing Marketing ho an'ny Dummies… mety ho niaritra ny andrana izy io. Fa ny teny bilaogy voafetra ny androm-piainany.
Ny anaran'ny tranonkalanay dia nantsoina hoe ny Martech Zone miaraka amin'ny URL marketingtechblog.com. Nanao zavatra mitovy tamin'ny tranokalako izay nataoko tamin'ny bokiko aho. Ny fepetra bilaogy niteraka valiny sahala amin'izany. Ny fepetra bilaogy toa antitra, natao manokana fa tsy matihanina. Niresaka an'io tranonkala io foana aho a boky. Ny sasany kosa miantso ny bilaoginy hoe magazine nomerika. Na izany aza, natahotra ny fiovan'ny sehatra aho noho ny fahefan'ny motera fikarohana nataoko tao anatin'io sehatra io, ka tsy sahiko velively ny manavao azy io. Hatramin'izao, rehefa nijanona ny fanasaziana ireo alàlan'ny fanovana Google ary nanampy a rafitra fanovana domain ao amin'ny console search.
Sarotra taminay ihany koa ny mizara ny fonenanay. Tsy maintsy nilaza foana izahay marketing-tech-tech-dot-com ary tsipelina izany amin'ny olona rehefa miresaka izany. Tsy sehatra iray nanakodia ny lela fotsiny izy ary mora adika tamin'ny URL azon'ilay olona tadidy sy soratana ao anaty tranokala. Martech lasa fehezanteny eken'ny indostria momba ny varotra sy ny teknolojia mifandraika amin'ny varotra.
Notadiaviko hatrany ireo domes mifandraika amin'ny martech izay mety misy mora tadidy… ary tamin'ny farany dia nitranga izany Martech.zone (manana marketing.technology koa izahay saingy lava be).
fampidirana Martech Zone
Nanampy orinasa maromaro nifindra monina tany amin'ny sehatra vaovao izahay ary nijery ny laharan'izy ireo tamin'ny farany tonga ara-dalàna ary niverina. Tonga ny fotoana hanaovantsika toy izany koa nongotako ilay plug - rehefa afaka folo taona - ny zoma. Mora ny nifindra monina tamin'ny ankapobeny, namonjy zavatra vitsivitsy:
Ho gaga ianao amin'ny fampiasana matetika ny anao sehatra anarana amin'ny mombamomba sy tranokalan'ny antoko fahatelo! Heveriko fa efa nampiasaiko tamin'ny sonia tranokala an'arivony sy tranokala fisoratana anarana. Tena mpanokatra maso io!
Ny rohy taloha sy ny fonenanay dia tao ambadik'i an SSL certificate. Vokatr'izany dia tsy afaka nanary solon'anarana ambony fotsiny tamin'ny tranokalanay izahay ary nanitsy ny olona. Tsy maintsy nampiantrano tranokala faharoa niaraka tamin'ny fonenantsika taloha izahay, nametraka mari-pankasitrahana ary nanao fanodinana maharitra mankany amin'ilay sehatra vaovao. Mety mila manao an'izany amin'ny sary koa isika satria manana URL voatondrona amin'ny alàlan'ny mailaka sy fampiharana finday. Mbola mandinika ny vokany aho.
Very daholo ny anay isa ny fizarana rohy sosialy. Tsy dia manahy mafy momba an'io aho, ary najanonay ny fampielezana ny fanisana momba ny fizarana. Gaga aho fa tsy misy amin'ireo sehatra manafoana sy sehatra sosialy manaraka rohy tahaka ny ataon'ny motera fikarohana. Toa zavatra mahafinaritra ny manara-maso ny URL azy ireo ny fanarahana URL.
Ka eo no anananao! Mampifanaraka ny fanananay sy ny tranokalanay rehetra izahay izao mba hampiditra ny marika vaovao… ny anay Fanontana Martech, ny Martech Zone Podcast amin'ny tafatafa, ary ireo fantsom-piarahamonintsika Martech (jereo ny fomba anaovantsika izany nanova ny Twitter nefa tsy namoy mpanaraka)!
veloma Martech Zone ary manahoana Martech Zone!
Tags: marikamanova sehatrabilaogy orinasa ho an'ny dummiesfanovana domainBlog Tech Marketingbilaogy teknolojia marketingmarketingtechblogMartechbilaogy martechmartech zonefanodinana maharitraSEO
Ahoana ny fananana fiovan'ny dizitaly amin'ny fifandraisana Influencer
Janoary 29, 2017 amin'ny 8:08 PM